Ihotele Ikhaphethi, iOfisi Ikhaphethi, IVinyl nokwadala, Umgangatho PVC - JW
Isitokhwe seNylon esishicilelweyo
Ithayile yekhaphethi engeyiyo iStock
Inayiloni 6.6 Ikhaphethi yethayile
Umbhoxo ongafakwanga isitokhwe
Ikhaphethi engeyiyo iStock
Elungiselelweyo Cowhide Rugs
Ithayile yekhaphethi yesitokhwe
Umbala wePalaphethi yePlanga
Inayiloni yokuDibanisa ikhaphethi yethayile
PP Ikhaphethi Tile
Inayiloni Ikhaphethi Tile
Isitokhwe esalukiwe Rug
Cofa kwi-SPC Plank- IXPE Buyela
I-LVT Plank-Glue Phantsi
Ingca eyenziweyo yengca
Imilinganiselo yeSiza / yeCad
Ukufakwa kunye nokugcinwa
ICANDELO LOKUQHUBA KWENKONZO
STOCK olukiweyo RUG
Imizobo ye-PP ene-PVC yangasemva-eKlasikhi
Imizobo ye-PP ene-PVC yangemva-iTraza SQ
Imizobo yeNylon enePVC ngasemva -Park Avenue
Uthotho lweRock Rug 199 uthotho
Stock womluki yerug 123 series
Stock womluki yerug 113 series
Ikhaphethi kwi-Edge Strip-Edgelock ™
Polyethylene Amagwebu Underlay Ecolay ™
Flat Sponge ngerabha Underlay Levlay ™
Zonke iimveliso zethu ziphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho kwibhetshi nganye.
Sineqela loyilo elinamava kakhulu nelinamava
siqhuba ulawulo lomgangatho ophindwe kathathu kuwo omabini amabanga esitokhwe kunye nakwiindawo ezingezizo ezesitokhwe.
Yintoni uMgangatho we-SPC
Umgangatho we-SPC luphuculo lweethayile zeVinyl zeLuxury (LVT). Yenzelwe ngokukodwa nge "Unilin" inkqubo yokutshixa ukucofa. Ke, inokufakwa ngokulula kumgangatho ohlukeneyo. Kungakhathaliseki ukuba uzibeke kwikhonkrithi, i-ceramic okanye i-flooring ekhoyo. Ikwabizwa ngokuba yi-RVP (iplanga eqinileyo ye-vinyl) eYurophu nase-USA. ...
UKUQHUBA KUMBALA WESITokhwe SESPC PLANK
Ukuxhasa abathengi bethu ngcono kwaye siqhube isitokhwe ngokutyibilikayo, siphucula ingqokelela yemibala ye-SPC kunye neJFLOOR Brand njengezantsi: SCL817, SCL052, SCL008, SCL041, irhoxisiwe i-SCL315, SCL275, SCL330, SCL023, SCL367, esandula ukongezwa Okwangoku, siphucula ukugcina isitokhwe sokufikelela ...
I-SPC PLANK (IVinyl Plank Flooring) EFAKWE KWIZITHANDA
I-SPC vinyl plank ikwanokufakwa i-easliy kwizinyuko, kwaye ukuthelekisa izinyuko kwigumbi kuya kufezekisa uyilo olungcono ngokubanzi. Kwiprojekthi eDUBAI AMER KALANTER VILLA, sisebenzise ikhowudi yemibala ye-SPC PLANK SCL010 kwigumbi lonke kubandakanya izitebhisi. Songeze neli n ...
INDLELA YOKUFAKA I-SPC PLANK (IVinyl Plank Flooring) KWINDAWO YOKUGQIBELA?
Iprojekthi yethu yakutshanje yeYONGDA PLAZA SHANGHAI Ingqina ukuba iplanki ye-SPC ilunge kakhulu kwindawo egobile. Ukufakwa kwe-vinyl flooring kwindawo egobileyo kuthatha ixesha elingaphezulu kwendawo eqhelekileyo, kodwa akunzima kakhulu kwaye inyathelo kuphela elongezelelweyo kukusika zombini iziphelo ze-SPC kwigophe. ...
Igumbi lokubonisa elitsha laseDubai liyakhiwa
Iqabane leJW GTS Carpets & Furnishing liqhuba ukwakhiwa kwegumbi lokubonisa laseDubai. Igumbi lokubonisa kulindeleke ukuba livule nge-15 ka-Agasti ka-2020. Kwimifanekiso emithathu yokuqala, igumbi lokubonisa lafakelwa iithayile zekhaphethi zesitokhwe sePark Avenue uthotho-PA04. Ipaki yeAvenue Avenue ...
Yasekwa ngo-2013, i-JW ikhaphethi kunye ne-flooring Co., Ltd yinkampani edibeneyo ebhaliswe eShanghai, China. Eyona ndawo iphambili yeshishini igubungela ikhaphethi, umgangatho kunye nezinye izinto zefanitshala, ukukhonza iihotele zenkwenkwezi, izakhiwo zeofisi zebakala A, amagumbi aphezulu kunye nokuhlala. Iza neekhaphethi ezenziwe ngesandla ezenziwe ngesandla, iikhaphethi ze-Axminster ezilukiweyo, iikhaphethi zikaWilton, iikhaphethi eziprintiweyo, kunye nenqwaba yemasheya eethayile zekhaphethi, SPC vinyl cofa iplanga ngenkxaso ethambileyo, izixhobo zekhaphethi, njl.
Sigcina isitokhwe kumanqanaba ali-9 eethayile zekhaphethi, amabala ama-2 omgangatho wevinyl, uluhlu olu-1 lwekhaphethi yenylon eprintiweyo.
Ngaphantsi kweveki enye kumanqanaba esitokhwe.
B302, No. 2588 South Hongmei Road, Shanghai, China (Ikhowudi yeposi: 201108)